Umhla My Pet » Olukhethekileyo Isipho Roses
ukubuyekezwa: UCanzibe. 28 2020 | 3 min ukufunda
Nokuba ukuyihamba kwakho ngomhla wokuqala, sibhiyozela isikhumbuzo wakho oneminyaka eli-10, okanye isindululo umtshato, roses kunokuba isipho esigqibeleleyo ukuncedisana nalinye ithuba uthando. Ukunika isipho roses inika uluvo oluthile amnandi kunye neklasi njani ukuba ngokwenene ukubonisa iqabane lakho. Izibini ziye ukucacisa uthando lwabo omnye komnye kunye roses kangangeenkulungwane. nokuba, ngokuba isipho ezifana, ungafuna ukuba ingcamango kancinci kakhulu indlela onokwenza isipho lwakho roses eyodwa. Musa ukubaleka umngcipheko yemihla akukhangela emehlweni ngomhla wakho; ukudibanisa ingcamango zobuchule ukuze isipho senu. Kukho iindlela ezimbalwa ukunika nondiliseko roses kwaye kanti isipho zokudala:
1. Roses Ekubeni Umyalezo
Enye indlela eyodwa ukunika roses njengesipho kukuba ngokubeka umyalezo ngqo phezu esiqwene roses zakho. Kuba umhla wokuqala unokuba flirty 'Hey Dance’ ebhalwe kwi iintyatyambo okanye, ixesha ngokuthandana njenge isikhumbuzo, unokuba 'Ndiyakuthanda’ ebhaliweyo. Unga ungambeka Uya sitshate?’ kwi rose njengendlela isindululo eyodwa.
2. Gold zalungisa Rose Single
ngeentyatyambo ezininzi (kwaye nabanye bejewellery) uya kuthengisa roses ukuba zalungisa ngegolide. Nangona le iya kuhlawula kancinci ngaphezu kweshumi elinesibini roses rhoqo, golide enye zalungisa Rose ungadibanisa kwinqanaba luthando olunzulu ukuze isipho senu, singasathethi nobuchule. Kuyingenelo ukuba igolide zalungisa Rose na ukuba ithatha ixesha elide kunokuba rose rhoqo. Iintyatyambo enameled ngokokuqhelekileyo zalungisa ngegolide, ukuba ndibanike inkangeleko roses cut luselutsha ocwengileyo ezikhethekileyo zegolide.
3. Itshokolethi Rose
abafazi abaninzi (abanye abantu kakhulu) umthande iintyatyambo phantse kangangoko bathanda itshokolethi. Kutheni ukunika izipho ezibini omnye itshokolethi wavuka! iivenkile zetshokolethi neelekese Gourmet rhoqo kuthengisa itshokolethi eziye mbumbile iimilo eyodwa izipho olulodwa. Esinye kwezo iimilo ngesiqhelo ekwi ngokohlobo irose. Uyakwazi kuthenga enye itshokolethi wavuka okanye ukuthenga abaliqela aze azilungise ngokungathi isipha roses ngokwenene. Ukuba ngomhla wakho uyakuthanda yena itshokolethi (okanye ke) Ngokuqinisekileyo baya kumangaliswa.
4. One Rose Lima kweso sihlwele
Ukuba ngaba uceba ukunika isipho yemveli roses elinesibini, kodwa ufuna ukongeza ukuba nangokuvulelekileyo zokudala extra, ukuya weentyatyambo yakho athenge 11 roses ebomvu, kwaye 1 Rose ngokukhethekileyo ezinemibala. Roses zinokuza ezahlukeneyo imibala ngoko qiniseka irose Kwanele yayahluke ndahlukile ukusuka 11 roses ebomvu, kodwa ukuba umbala na ukungqubana namanye roses. Xa u nikela isipha wakho ukuxelela umntu wakho okhethekileyo ukuba ubuhle babo emangalisayo yenza kubo ume ngaphandle abaseleyo isihlwele nokuba intle enye Besuka olubekwe ngaphandle iqela roses ebomvu kubonisa ukuba ubuhle ekhethekileyo iqabane lakho.
Ezi iindlela ezine ahlukile ukwenza isipho yakho roses baye okhule ngakumbi kwezinye yakho ebalulekileyo. Ngelixa iintyatyambo sisipho ukubhiyozela omthandayo okanye kwitheko lakho ekhethekileyo kulwalamano lwakho, ngokongeza eminye bokuyila ngokusebenzisa enye yezi ngcamango kukunceda ukubonisa ngcono indlela Ifuthe iqabane lakho iye ubomi bakho kwaye ugxininise indlela ubakhathalele. Kwakhona uya ukudala gca ukonwaba kwakho omnye ubutyebi wayemthanda iminyaka ezayo.